Sizisebenzisa Njani Izixhobo Zoluntu Kwindawo Yokusebenzela | Martech Zone
Sizisebenzisa njani izixhobo zeNtlalo kwindawo yokusebenzela
NgoLwesithathu, Meyi 29, 2013 NgoLwesithathu, Meyi 29, 2013 Douglas Karr
Kwisifundo esivela kuMicrosoft kwi Ukusetyenziswa kwezixhobo zeNtlalo kunye nokuqonda kwiShishini, kubonakala ngathi bafumanise okwangoku ubungqina obungakumbi ukuba abafazi bakrelekrele kakhulu kunamadoda.
Amadoda kunokwenzeka ngakumbi kunabafazi ukuba bathi ezi zithintelo zibangelwa ziinkxalabo zokhuselo, ngelixa abasetyhini kunokwenzeka ukuba babek 'ityala ukulahleka kwemveliso.
Ugh. Kulusizi ukuba, emva kwalo lonke eli xesha, sisenabantu emsebenzini ukukhubaza amandla ukuze abasebenzi basebenzisane, benze uphando kwaye baphucule imveliso yabo. Ungayiqapheli inyani yokuba, ngokusebenzisa uthungelwano lwasentlalweni, unokufikelela koontanga, iingcali, abathengisi kunye neengcali akukho nto iyintloni kule mihla. Kwaye ngaphandle kokuba unabasebenzi ekufuneka beshiye ii-smartphones zabo kwimoto yabo, banokufikelela kwimithombo yeendaba. Ukuba bayayisebenzisa gwenxa, impendulo ayikukuthintela ukufikelela komntu wonke… impendulo kukugxotha umqeshwa.
tags: microsoftimvelisoImidiya yokuncokolainethiwekhi yokuncokolaukufunda kwindawo yokusebenza
I-LuckyMetrics: UkuKhangela ukuKhangela ngokuSebenzayo okuKhokhelwayo
I-BlitzMetrics: IiDeshbhodi zeendaba zeNtlalo yeNtengiso yakho
Juni 9, 2013 ngo-11: 30 AM
UDouglas, le yayiyinto entle! Ndikhangela izithuba kunye nemithombo yeendaba zentlalo ejikelezayo ngeeveki zam ze-4 zeBlog Blog (intandokazi yam evekini) kwaye ngokuqinisekileyo ndizakuyibandakanya le. Enkosi ngokwabelana ngolwazi.